China Nchekwa onwe wheel wheel Booster 8201 rụpụta na ụlọ ọrụ | Sebter
Nchekwa onwe nke na-ebugharị wiil 8201
A na-etinye booster ahụ n'ụzọ siri ike: ọ na - ejide ihe nkedo okpukpu abụọ iji mechie nrụnye ahụ, nke siri ike karị, na elasticity nke ịghasa mgbanwe ahụ adịghị agbanwe agbanwe, kwụsie ike na nchekwa, ma belata ihe egwu zoro ezo
Ejiri ọla kọpa niile mee: ahụ dum nke booster bụ ọla kọpa niile, mgbe ahụ elu ya bụ chrome-plated, ihu ya dị nro ma dịkwa nro, ma ogo ahụ siri ike.
Ewepụghị imewe: The ewepụghị imewe enwekwu ike ebe na bụ nso ka sterịn wheel, nke na-azọpụta mgbalị na bụ ihe na akara na-akwọ ụgbọala ọrụ àgwà.
Car booster bọl niile ọla kọpa Production Control bọl n'iru wheel booster 8201SBT
Iji nkenke biarin: nkenke biarin nwere elu ike, ezi ike, ire ụtọ, na anwụ ngwa ngwa.
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ: Ọrụ otu aka nke sterịn ahụ, enweghị ọrụ ọ bụla achọrọ, ngwa ngwa na nchekwa.
Product aha: n'iru sterịn ụkwụ booster
Isi ihe: ọla kọpa
Kwesịrị ekwesị maka ịkwado ụkwụ: Ọkpụrụ: gburugburu 10/11/12 cm (obere, ọkara, nnukwu)
Otu ibu: 141 g (obere), 144 g (ọkara), 150 g (buru ibu)
Ogo: dayameta: 42 mm, elu: 46 mm (obere), 51 mm (ọkara), 56 mm (buru ibu)
Igwe gasị: 73 * 24 * 3 mm, 73 * 24 * 1.5 mm
Nchedo gburugburu ebe obibi: RoHS-2011/65 / EU
Ọ bụ ezigbo ụzọ iji melite ngwaahịa na ọrụ anyị. Ebumnuche anyị bụ imepụta ngwaahịa maka ndị ahịa yana ezigbo ahụmịhe maka ndị na-eweta anyị. Anyị na-asọpụrụ isi anyị na-eme ihe n'eziokwu na azụmaahịa, ihe kacha mkpa na ụlọ ọrụ ma na-eme ike anyị niile iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ngwaahịa dị egwu.
Companylọ ọrụ anyị na-enye ndị ahịa anyị ezigbo mma na ọnụ ahịa dị mma. Na mbọ anyị, anyị nwere ọtụtụ ndị ahịa n'ọtụtụ mba na ngwaahịa anyị na ngwọta anyị merie otuto site n'aka ndị ahịa n'ụwa niile. Ebumnuche anyị dị mfe mgbe niile: Iji mee ka ndị ahịa anyị nwee ọfụma kachasị mma ma na-ewepụta oge. Nabata ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi ka ha kpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmaahịa ọdịnihu.
Ihe osise ndị ọzọ na-egosi
Nke gara aga: Nchekwa onwe na-ebugharị wiil 1098-3P
Osote: Auto steeringi wiil Booster 8204
Chaja na-agba ọsọ maka ọkụ ọkụ Sịga 2103
4 na 1 Car agụụ Cleaner 2906
24V Ugboro abụọ USB Fast Charger 2903
Car multifunctional magnetik na ekwentị mkpanaaka holde ...
Car N'azụ Armrest nko Mobile ekwentị njide 1311